Ny Wallapop dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana fizarana vaovao: fiara | Vaovao IPhone
Ny Wallapop dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana fizarana vaovao: fiara
Nandritra ny roa taona, Wallapop dia nanjary safidy hafa amin'ny fomba nentin-drazana amin'ny fivarotana entana faharoa toy ny Thousand Ads, eBay, Vivo ... Noho ny toerana misy ny fitaovantsika dia afaka mahita haingana izay rehetra tadiavin'ny mpiara-monina aminay izahay raha te-hividy azy isika. Na dia tsara aza ny doka amin'ny fahitalavitra matetika, ny fiasan'ny fampiharana, amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia mamela zavatra maro irina, indrindra amin'ny zavatra manan-danja toy ny hafatra. Raha miresaka ny mety hisian'ny sivana atiny isika mihasarotra ny zavatra, vokatra samihafa izay tsy misy ifandraisany amin'ny sokajy iray ihany, zavatra manakana ny asa rehefa mitady vokatra izay tsy dia manana fampahalalana be loatra isika na tsy dia mazava loatra momba izay tadiavintsika.
Toy izany koa no mitranga amin'ny faritra Motor and Accessories, izay ahitantsika moto, fiara ary kojakoja mifangaro amin'ny faritra mitovy. Soa ihany ho an'ireo rehetra mikasa ny hividy fiara faharoa, ny tovolahy ao Wallapop dia namorona faritra antsoina hoe Cars, izay azontsika atao apetraho ny teny fikarohana ho an'ny fiara tadiavinay.
Ato amin'ity fizarana vaovao ity dia afaka misafidy karazana fiara tadiavintsika isika: Kely, Coupe, Sedan, Estate, Minivan, 4 × 4, Van ary ny hafa. Fa raha tsy fantatsika hoe sokajy inona no mifanitsy amin'ilay fiara resahina, dia afaka mampiasa ny motera fikarohana ho an'ny marika sy modely isika. Ity fizarana vaovao ity koa dia mamela antsika hametraka ny elanelam-bidy tianay holaniana, ary koa ny daty fisoratana anarana sy ny isan'ny kilometatra.
Mba hanatsarana bebe kokoa ny fikarohana, azontsika atao ihany koa ny mametraka raha ny fiara ilaintsika no izy diesel, lasantsy na herinaratra, ary koa ny karazana fanovana: manual na mandeha ho azy. Azontsika atao ihany koa ny mametraka ny faritra tiantsika hanaovana ny fikarohana, raha ekena ny fifanakalozana ary koa mametraka ny lamina izay tiana aseho ireo fiara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ny Wallapop dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanampiana fizarana vaovao: fiara
Foxconn dia nanambara ny fitomboan'ny vola miditra noho ny fivoahan'ny iPhone 7 ambany
Apple's Carpool Karaoke dia hanana mpanolotra hafa